News - Warshad burburiyaha dhagax naaftada Mobile u diray Philippines
Burburiyeyaasha dhagxaanta moobiilka waa mashiinnada dhagxaanta lagu jajabiyo oo lagu rakibo raad-raaca ama trailer-ka kuwaas oo si fudud loogu socon karo gudaha iyo inta u dhexeysa goobaha wax-soo-saarka. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka isku-darka ah, codsiyada dib-u-warshadaynta, iyo hawlaha macdanta. Burburiyeyaasha mobilada waxay bedeli karaan hababka burburinta joogtada ah, taas oo yaraynaysa baahida loo qabo qaadista oo sidaas awgeed dhimaya kharashaadka hawlgalka.
Horraantii 2021, waxaan ka helnay weydiinta macaamiisheena Filibiin ee caadiga ah. Wuxuu u baahan yahay inuu dhagaxa buurta ku burburiyo isku-darka dhismaha. Awoodiisa loo baahan yahay waa 30-40 tan saacaddii, iyadoo cabbirka wax-soo-gelinta ku dhow yahay 200mm iyo cabbirka wax-soo-saarka kama-dambaysta ahi wuxuu ka yar yahay 30mm. Oo wuxuu kaloo u baahan yahay burburinta waa laga guuri karaa meel ilaa meel kale.
Markaa wada xaajood labada dhinac ka dib, waxaanu isaga u samaynaa warshad daanka naaftada naaftada guura oo isku xidhan. Warshada waxaa ka mid ah taageerada trailer guurguura, quudiyaha gariiraya, daanka burburiya, suunka qaada. Iyo sababta oo ah aagga buurtu ma laha koronto, markaa waxaanu ku qalabaynaynaa daanka burburinaya mishiin naafto ah iyo koronto-dhaliyaha iyo feediyaha gariiraya iyo qalabka qaada waxa ku shaqeeya koronto-dhaliye si uu u shaqeeyo.
Tilmaamaha warshadda daanka burburisa guurguura waa sida soo socota:
Qaabka Shayga Cabbirka wax gelinta ugu badan/mm Cabbirka soo-saarka/mm Awoodda Awoodda/HP (t/h) Miisaanka/ton
Quudiye gariiraya VF500x2700 400 / 1.5KW 40-70 1.1
Burburiyaha daanka PE300×500 250 0-25 30HP 25-50 5.9
Gaadhida suunka B500x5.5m 400 / 3 30-40 0.85
Cabbirka sawirka 5.5×1.2×1.1m, 1.8 tan oo taayiro leh iyo afar lugood oo taageero ah marka uu burburiyaha shaqaynayo.
Ka dib markii la dhammeeyo wax soo saarka, warshadda burburiyaha guurguura ayaa la kala qaaday, si ay si fudud ugu dhejiso weel 40ft ah. Shaqaalaheennu waxay dejiyeen feedhiyaha gariiraya, ka dibna warshadda burburisa waxaa lagu riday weelka si habsami leh, ka dibna quudiyaha ayaa sidoo kale la raray ka dib.
Ka dib imaatinka, jawaab celinta macaamiisha waa mid aad u fiican. Ka dib socodka tijaabada, warshada burburiyaha ayaa si buuxda loo isticmaali doonaa. Iyo waxqabadka shaqadu waa mid deggan oo dhagaxa ayaa lagu jajabiyaa cabbirka la rabo. Matoorka naaftada wax badan ayuu ka caawiyaa in uu daanka burburiyo oo uu ka fogaado dhibaatada koronto la'aanta.
Waqtiga boostada: 25-06-21